मलेसियन एयरलाइन्सको हराएको विमानको रहस्य – Khabar Silo
मार्च ८ सन् २०१४ मा क्वाललम्पुर मलेसियाबाट १२ः३५ बजे राती उडेर चीनको बेइजिगंमा बिहान ६ः३० मा पुग्ने भनी उडेको जहाजको आजसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन । आधूनिक जमानामा यसरी अत्याधूनिक विमान आफ्ना २३९ जना यात्रुसिहत ५ वर्ष भइसक्दा पनि हराइरहेको मात्र नभई विमानमा के भयो भन्ने सामान्य अड्कलसम्म कसैलाई छैन् । कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नसक्ने तथ्यको कमी र ठोस प्रमाण नभएको हिसाबमा आज ५ वर्ष पछि पनि यो जहाज र यात्रुबारे कसैलाई केहि जानकारी छैन, यत्रो ठूलो जहाज आखिर कहाँ छ त? समुन्द्रको गहिराई र मरुभूमिको बालुवाको हरेक कण खोज्दा सम्म पनि यस जहाजको सुँईको नपाँउदा आजको उड्डयनका लागि यो संभवत सर्वाधिक ठूलो रहस्य मानिएको छ ।
यो जहाज बोईगं कम्पनीको ७७७ मोडल थियो, जुन आजसम्म पनि अत्याधूनिक र सुरक्षितमध्य एउटा विश्वप्रसिद्ध मोडल हो । केवल ५ घण्टा ३४ मिनटको फ्लाइटमा यस विमान कता हरायो, विश्व चकित छ । जहाजमा ४९,१०० केजी ईन्धन थिो जस्ले जहाजलाई ७ घण्टा ४१ मिनटसम्म आकाशमा धान्न सक्ने देखिन्छ । यदि वाटामा केहि अफ्ठेरो परिस्थिती परेको खण्डमा जहाजले पर्याप्त ईन्धन भएका कारणले सडर्भजन लिएर अन्य कतै अवतरण गर्न सक्ने या फिर्न सक्ने पनि देखिन्छ । यस जहाज अमेरिकी कम्पनीले निर्माण गरेको र ११ वर्ष पुरानो जहाज भएको पाइन्छ, यस अघि यस जहाजमा कुनै पनि प्रकारको प्राविधिक समस्या नआएको देखिन्छ, तर यि सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि आखिर कहाँ गयो त यो भिमकाय जहाज ?
जहाजमा १५३ जना चाइनिज, ५० मलेसियन, ७ ईण्डोनेशियन, ६ अष्टैलीयन, ५ भारतीय, ४ फ्रेन्च, ३ अमेरिकन, २ क्यानडेली, २ ईरानी, २ न्यूजिलेन्डरस, २ यूक्रेनी, १ डच, १ रसियन र १ ताइवानी नागरीक सवार थिए । १२ः३४ मा उड्ने फ्लाइट १२ः४२ मा क्वलालम्पुरबाट उड्यो र तत्कालै जहाजलाई १८,००० फिटमा चढ्न अनुमती दिइयो । उड्नअघि को पाइलटले सामान्यरुपमा एयर ट्राफिकसंग कुरा गरेको र उडेपछि क्याप्टेनले कुरा गरेको भ्वाइस रेकर्डहरु छन् । उडेको ३७ मिनटसम्म जहाज सामान्य उडानमा भएको देखिन्छ जब क्वललम्पुर एयर ट्राफिकले जहाजलाई भियतनाम एयर ट्राफिकसंग कुरा गर्न जानकारी दियो ।
यसरी कुरा हुँदा मुख्य पाइलटले मलेसियन ३७० गुडनाइट भनी सामान्य प्रतिक्रिया दिए तर त्यो नै जहाजको ककपीटसंगको अन्तिम सम्पर्क भयो । उतिवेला जहाज थाइल्याण्डको गल्फमाथि उडिरहेको थियो तर त्यसको ३ मिनटपछि राडारबाट हराएको जहाज आजसम्म पनि भेटिएको छैन ।
काठमाडौं, १६ माघ । काठमाडांँको चाबहिलबाट गैंडाको खागसहित प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको खड्गभद्रकालीका ४६ वर्षीय लव खत्री र बाजुराको बुढीगंगाका २२ वर्षीय दिनेश थापा रहेको छन् । उनीहरुले चाबहिल एरियामा गैंडाको खाग २५ लाखमा बेच्न बार्गेनिङ गरिरहेको सूचनाको आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । खत्री […]
यी हुन् मानिसहरुको ज्यान बचाउने साहसी नेपाली चेली उद्धार पाइलट प्रिया अधिकारी
३१ वर्षकी प्रिया अधिकारी नेपालकी एकमात्र महिला उद्धार पाइलट हुन् । प्रिया सगरमाथाको उचाइभन्दा माथिको उचाइमा हेलिकप्टर उडाएर मानिसहरुको ज्यान बचाउँछिन् र त्यहाँ पुगेका सहयोगीलाई सहयोग गर्छिन् । प्रिया डाक्टर बन्न चाहन्थिन् तर एउटा भेटले उनलाई पाइलट प्रेरित गर्यो । उद्धार पाइलटको जुन जिम्मेवारी छोडेर आधा दर्जन युवतीहरु भाग्छन् उनले त्यही करिअर रोजेकी छिन् । […]